Wednesday, November 28, 2007 by ဂျူလီယာ
Happy Birthday For You … :P
ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း ကျွဲဖြူ (ခ) မျိုးကြီး ရေ
၂၉.၁၁.၂၀၀၇ (ကြာသပတေး) နေ့
ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့မင်းရဲ့ မွေးနေ့ ပွဲမှာငါကတစ်နေ
ဒီကနေပဲ မင်းအတွက် မွေးနေ့ကိက်
ပေးလိုက်မယ်နော် ……. ၀အောင်စားနော် ….ဟဲဟဲ
Tuesday, November 27, 2007 by ဂျူလီယာ
ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုတော့ အဆုံးရှုံးမခံနဲ့နော် ........
၀င်ပေါက်ကြယ်ပြီး ထွက်ပေါက်ကျဉ်းတဲ့ သဘောရှိတယ်
ဘ၀ဆိုတာ အဓိပါယ်ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး
အဆုံးမရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့အတူ အနွေးထွေးဆုံး ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့
ဘုရားရှင်ပေါ်မှာ မင်းရဲ့ဝေဒနာကိုပုံအပ်လိုက်ပါ .......
ဒုက္ခဝေဒနာကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး ထိန်းချုပ်နေခြင်းဟာ
အစိပ်စိပ်အမွာမွာ ချက်ဆီးနေတာနဲ့ အတူတူပဲ ......
မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး
ငါလုပ်မှဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် မင်းဆီမှာ ရှိနေပြီဆိုရင်
စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ မှုတွေနဲ့ ဒုက္ခပြဿနာကြားထဲမှာ
မိုက်ရူးရဲရာ ကျလိမ့်မယ် ...
ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန် ပြဿနာတစ်ခုကို ထိပ်တိုက်
ဒါမှမဟုတ် စာနဲ့ရေးပြီး မဖြေရှင်းပါနဲ့
သွေးအေးတဲ့ အခါကျမှလုပ်စရာရှိတာဆကိလုပ်ပါ ........
လင်းလက်တဲ့ နေ့သစ်တွေ ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်
ကမ္ဘာဦးကတည်းက ဒွန်တွဲပြီး ရှိနေပြီးသားပါ..............
get this flash
ဘလောက်တစ်ခုလာလည်ရင်း တွေ့ခဲ့တာပါ ချစ်စရာကောင်းလို့ တင်လိုက်ပါတယ်.......
"ကျွန်မတော့ ချစ်သူပန်းခင်းလို့ အမည်ပေးလိုက်မယ်နော်"
Posted in: Love |0comments | |
Sunday, November 25, 2007 by ဂျူလီယာ
* သွားကြစို့ မင်းနဲ့ ငါ
* သွားကြစို့ မင်းနဲ့ငါ
Thursday, November 22, 2007 by ဂျူလီယာ
လိုတာမရရင် တဒုန်းဒုန်း ၊ ရှိတာကိုအကုန်လွင့်
မေမေဟာ သမီးရဲ့ ကောင်းကင်စစ်ပါ
တချိန်တုန်းက ကောင်းကင်ရဲ့  မာယာတွေကို
ခုတော့ လောကဓံရဲ့ မုန်တိုင်းကြားမှာ
Posted in: မေမေကဗျာ |0comments | |
Tuesday, November 20, 2007 by ဂျူလီယာ
တန်ဆောင်တိုင်များလည်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကျော်လွန်လာပြီနော်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ခုချိန်မှာ မင်းတိုကဘာတွေလုပ်နေလဲ
တို့တတွေရဲ့ တန်ဆောင်တိုင်ကို မှတ်မိသေးလား
မိအိုဖအိုပါမကျန် ၊ မောင်မယ်စုံတွဲလေးတွေလည်း
ငါတို့ရဲ့တန်ဆောင်တိုင်လေးကို ပြန်အောက်မေ့ပြီး ပျော်ရပါတယ်
မေ့ထားချင်ပေမဲ့ မှတ်မိနေသေးတဲ့ ညလေးတစ်ည
ပေကလပ်၊ ပေကလပ်နဲ့ သူများအတွဲတွေလိုက်ချောင်း
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ငါတို့ရဲ့ သူခိုးညလေးပါနော်
ဒီအမှတ်တရ တန်ဆောင်တိုင်လေးကိုတော့ ငါ့ရင်ထဲမှာ အမြဲကိန်းအောင်းနေဆဲပါ
Posted in: အမှတ်တရတန်ဆောင်တိုင် | 1 comments | |
Thursday, November 15, 2007 by ဂျူလီယာ
၀မ်းစာအတွက် လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ပုံ
ရိုးသားလှတဲ့ ချစ်စရာ့ ကယာန်းလှပျိုဖြူများ
ဖခင်တစ်ယောက်၏ မိသားစုအတွက် တစ်နေ့တာ ရုန်းကန်မှု
ကယာန်းမိခင်တစ်ယောက်၏ တစ်နေ့တာ လုပ်ငနးများ
ကယာန်းလူမျိုး၏ အိမ်တွင်းမှု လှုပ်ငန်းမျာ
တောင်ကွဲစေတီတဲ့ အရမ်းချစ်တဲ့ချစ်သူများ မသွားရဘူးနော် ကွဲသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးရှိတယ်နော်
Posted in: ချစ်စရာ့ဌာနေ | 1 comments | |
Tuesday, November 13, 2007 by ဂျူလီယာ
ဘ၀ကိုရေတိမ်မှာ မနှစ်မိစေနဲ့နော် ….
လက်တွေ့ဘာမှ မလုပ်သေးပဲနဲ့ တွေးကြောက်နေတာဟာ
ကိုယ့်သမိုင်းကိုရေး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနေတဲ့ လောကမှာ
ဘ၀ကို အဆိပ်ခွက်ထဲနှစ်တာနဲ့ အတူတူပဲ …
နားလည်မှု အပြစ်ဝပေးနိုင်တဲ့သူဟာ မိတ်ဆွေစစ်ပါ ……
မင်းမှာ ဘာအခက်ခဲ ပြဿနာမှမရှိသေးဘူဆိုရင်
ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှုတ်အားဖြင့် ကူညီပေးလိုက်ပါ
သူတစ်ပါးရဲ့ အားနဲချက်ကိုပဲ ကြည့်ရှုပြောဆိုနေခြင်းဟာ
ကြီးမားတဲ့ ဒုက္ခပြဿနာတစ်ခုပါ ……
သုခစည်းစိမ်ကို မလိုချင်တဲ့သူပဲ …….
တခါတစ်ရံ သူများကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးတာထက်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒုက္ခပေးတာ ပိုများတယ် ………..
ရေဆန်တက်တဲ့ အချိန်လဲရှိရမယ် ………..
ကျွန်မရဲ့ အစ်မရေးပေးထားသော စာလေးတွေပါ
.....မမျော်လင့်ပဲ ဖြစ်လာမဲ့ အနာနာဂါတ်ပြသာနာတွေကို တွေးပြီးကြောက်နေတတ်တဲ့ မျက်လုံးပြုးလေးသို့ ထာဝရရည်ရွယ်ရင်း ........
ဆိုးဝါးတဲ့ အတိတ်က အရိပ်မဲကြီးဟာ
ကွယ်ရာမဲ့ အပြစ်တစ်ခုက ပိုပြီး ဒုက္ခပေးပါတယ် ......
ပြဿနာကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖြင်းအားဖြင့်
မင်းရဲ့ ဝေဒနာအလုံးကို ရေတွက်ကြည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြေရှင်းသွားပါနော်
Posted in: Life True |0comments | |